Kude: Ukushintsha Kwamagagasi Kuthola Idethi Yokukhishwa! - Ukudlala
Kude: Ukushintsha Kwamagagasi Kuthola Idethi Yokukhishwa!
Kude: Usuku Lokukhipha Ukushintsha Kwamagagasi
Kude: I-Changing Tides Plot
Idedela kuziphi izinkundla?
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, kwakhululwa igeyimu yevidiyo ethi FAR: Lone Sails, evumela abadlali ukuthi babambe indima yomuntu osindile ezama ukushayela imoto yakhe endaweni enothuli, yangemva kwe-apocalyptic. Umdlalo, owathuthukiswa yinkampani yaseSwitzerland i-Okomotive washicilelwa ngabakwaMixtvision, uwumdlalo wokuskrola oseceleni ozowuthokozela abadlali.
KUSEKUDE: I-Lone Sails yakhishelwa i-PC, i-PlayStation 4, i-Nintendo Switch, i-Xbox One, kanye namadivayisi eselula ngo-Okthoba 26, 2018. Umdlalo manje usunochungechunge oluthi, FAR: Changing Tides, olushicilelwe ngabakwaFrontier Foundry kanye ihlose ukunyakazisa izinto kancane mayelana nokudlala umdlalo. Ithoni yegeyimu yokuqala izogcinwa ngokulandelayo, kodwa abadlali kuzodingeka bashayele imoto entsha ezindaweni zasemanzini.
Esimemezelweni sakamuva, u-Don Schmocker, umsunguli kanye nomculi oholayo kwa-Okomotive, uthe I-FAR: Changing Tides izokhishwa ngomhla ka-1 Mashi 2022, ku-PlayStation 4 naku-PlayStation 5. Umdlalo uzotholakala ku-PlayStation 4 kanye ne-PlayStation 5. Uqhube wathi lo mdlalo uzoba uhambo lwezimoto oluzolandela umfana osemncane ogama lakhe lingu-Toe njengoba ehamba enqamula umhlaba ogcwele izikhukhula, wangemva kwe-apocalyptic emkhunjini wakhe, kanye nabanye abalingisi.
Ngokuka-Schmocker, abathuthukisi be-Okomotive bathole inqwaba yempendulo emihle yabadlali mayelana nokuthi i-FAR: Lone Sails' ukuzindla, ukuzindla kwemvelo yabathinta kanjani ngesikhathi senqubo yokuthuthuka. Ngenxa yalokho, abathuthukisi bafuna ukugcina lowo mkhathi ngokulandelanayo kuyilapho beshintsha izinto kancane. Ngokusho kwabadali, i-sequel izonikeza abadlali umuzwa oshukumisa ingqondo abazowujabulela emdlalweni omusha.
Funda futhi: I-Elex 2: Konke Odinga Ukukwazi!
U-Schmocker uthe u-Okomotive ufuna ukwandisa ububanzi besizinda ngokufaka izici ezifana nesimo sezulu esinesiphepho nezindawo ezintsha ezifana namadolobha acwile emanzini esitolimendeni sesibili. Ngale ndawo entsha, onjiniyela banethemba lokunikeza bobabili abadlali abakhona nabasha ulwazi oluhehayo olufaka izindida ezintsha kanye nezinsimbi zomkhumbi ezizoba yingcweti. Ukuze bahambe ngalesi silungiselelo esisha, abadlali bazosebenzisa umkhumbi we-Toe, ofakwe oseyili, izigwedlo, nenjini, kanye nezinye izimoto ezintsha emdlalweni.
I-Changing Tides ngeke itshelwe abadlali njengoba kwenzeka emdlalweni wokuqala kodwa kuzomele itholwe yibona. U-Okomotive ubhale iningi lendaba kanye nokwakhiwa komhlaba kokulandelayo ngesikhathi sokukhiqiza kwangaphambili, okuvumela abathuthukisi ukuthi baklame izindawo ngokuhambisana nendaba. Lo mdlalo uthatha indlela yokuxoxa indaba yemvelo efana naleyo yemidlalo efana ne-Hyper Light Drifter.
Indaba efihliwe yomdlalo, ngokusho kuka-Schmocker, izodalulwa ngokutholwa kwamagugu acwile, izakhiwo, izisulu zezikhukhula, nezinye izinsalela zegeyimu edlule. Zonke lezi zinto zizoba nendaba okufanele ziyixoxe emdlalweni, futhi inhloso ukuthi abadlali bazizwe bexhumene ngokuqinile nezwe lomdlalo ngenxa yokusebenzisana kwabo nawo. Indawo egcwele izikhukhula iphinda yethule izinga elisha lokuma kumdlalo wegeyimu, njengoba uhambo lwabadlali luzobayisa ngaphezulu nangaphansi kwamanzi kuyo yonke igeyimu.
Funda futhi: I-Elden Ring: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!
KUDE: I-Changing Tides izokhishwa ngoMashi 1, 2022, ku-PC, i-PlayStation 4, ne-PlayStation 5. I-Nintendo Switch, i-Xbox One, ne-Xbox Series X/S zonke ziyatholakala.
Funda futhi: Ikhampasi Yamaphuzu Amabili: Okulandelayo okulindelwe ngabomvu kuyeza maduze!
U-Megan Ulahlekile Isiqephu Somgqomo : Yonke Into Ilapha Odinga Ukwazi Ngayo